Tamarta - Sabahionline.com
Kenya oo qorshaynaysa in dhalinta korontada ay ku ballaariso digada xoolaha
Gaaska methane-ka oo laga soo saaro digada xoolaha iyo saxarada dadka ayaa dhaliya il tamareed nadiif ah oo la cusbooneeysiin karo kaas oo ka caawin kara qoysaska deggan miyiga in aysan u baahan inay ku xirnaadaan qeybiyaha korontada qaranka.
Waaxda tamarta Tansaaniya oo la filayo in lagu xoojiyo amaah uu bixinayo Baanka Adduunka
Amaah caddadeedu ay tahay 196.5 shilin ($121.5 milyan) ayaa Tansaaniya ka caawin doonta ugu yaraan saddex meelood wax soo saarkeeda korontada marka la gaaro 2015-ka, iyadoo dib u dhigaysa kharashaadka ka baxa macaamiisha korontada.
Soomaalida oo tamarta qorraxda laga dhaliyo uga hortagaysa nadaab-guurka
Wax ku karsiga tamarta qorraxda, ayaa Soomaalida u suuro galisey in ay iska ilaaliyaan isticmaalka shidaalka kale sida dhuxusha, taas oo baabi'inaysa kaymaha wasakhaynaysana deegaanka.
Maal-galiyeyaal iyo mas'uuliyiin ka wada hadlay qorshe la doonayo in Jabuuti loogu sameeyo warshad sifeeysa saliidda
Dhismaha warshadda sifeeynta salidda kaliya ma abuuri doonto shaqooyin, waxay kaloo kala bar hoos u dhigi doontaa sicirka saliidda iyo naaftada, sida ay qabaan mas'uuliyiintu.
Mashruuca ayaa gacan ka gaysan doona kobcinta wax soo saarka tamarta, daboollida baahida loo qabo korontada isla markaana Tansaaniya u ogolaado in ay koronto dhoofiso, sida ay saraakiili sheegtay.
Mashruuca Harada Turkana ee Tamarta Dabaysha kaas oo la rajaynayo in uu yareeyo maqnaashaha korantada, dakhli iyo shaqana abuuro, ayaa dib loo dhigay sabab la xidhiidha hubaal la'aanta xagga iswaafaqida iibsiga.
Nalal ku shaqeeya sollarka oo daari doona waddooyinka Muqdisho
Iyada oo ay Muqdisho ku soo noqonayso noloshii, ayuu maamulka gobolka Banaadir waxa uu bilaabay in uu Waddada Maka al-Mukarama ku dhajiyo nalal ku shaqeeya sollarka.